Banyere anyị - Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.
Ọnye na-bụ Shengrui
Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd .bụ ọkachamara na-emepụta ihe na onye na-ebupụ ihe bụ ọkachamara na nhazi na mmepụta nke ọrụ ígwè.Anyị anọwo na imepụta na imepụta ihe nrite egwuregwu, nko na-achọ mma ọla, racks, ndị na-efegharị ikuku, nka mgbidi ọla, akwụkwọ ọla eji achọ mma, ndị na-ejide kandụl, akwa mmanya, ihe njide ọla na ọtụtụ ngwaahịa ọla ndị ọzọ ahaziri maka ihe karịrị 14 afọ.
Anyị nwere imewe na ahịa otu anyị.Anyị nwere ike ịnye gị echiche imewe mara mma na nzaghachi dị mma nke nsogbu ire ere na mgbe ire ere.ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ikwurịta ngwaahịa ahaziri ahazi, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.Anyị na-atụ anya ka anyị na ndị enyi nọ n'ụwa niile na-enwe mmekọrịta azụmahịa na-aga nke ọma.
Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa.Ụlọ ọrụ anyị nke ọma, ndị ọrụ a zụrụ azụ nke ọma na njikwa mma dị mma n'oge niile nke mmepụta na-enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju ndị ahịa.
Anyị ọrụ bụ laser ịkpụ, nke nwere ike dị ukwuu ibelata nhazi oge, akwụ ụgwọ, na melite àgwà nke ọ bụla otu product.We anabata ala MOQ iji na-enweghị na-eme mould.We nwere 12+ afọ nke ahụmahụ emebe otu nke na-eme ka anyị nwere ikike iji were ihe ọ bụla ahaziri oru ngo dị ka ndị ahịa 'echiche, ịse ma ọ bụ sample etc. Ọzọkwa anyị na-enye ODM ọrụ.
Na 2006, Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.tọrọ ntọala.
Na 2007, anyị wuru anyị ahịa otu.
Na 2010, anyị nwetara ISO9001 Asambodo.
Na 2012, Anyị zụtara 3 ọhụrụ 3000w laser ọnwụ igwe na tọrọ ntọala imewe ngalaba.
Na 2014, anyị zụtara ekwe igwe, ịgbado ọkụ igwe, polishing equipments nke na-enyere anyị aka ịchịkwa anyị ụgwọ na àgwà mma.
Na 2016, anyị nyekwara $200000.00 maka mkpuchi mmepụta edoghi nke na-eme ka anyị na-achịkwa dum Filiks nke mmepụta, na-eme ka anyị na-akwụ ụgwọ ọzọ na ndị ọzọ asọmpi na àgwà akara na-na-na-na ọzọ siri ike.
Na 2017, anyị na-amalite ịrụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Disney. Nke a na-eme ka anyị nwekwuo obi ike na mpaghara a.
Ụlọ ọrụ Sọpụrụ
Osisi ite Hangers, Onye nhazi nko igodo, Mgbodo osisi nkwudo mgbidi, Igwe mgbidi ọla, Ngosipụta njide olu, Nko njide igodo,